Maxkamad Kenyan ah oo xabsi daa’inkii ugu horeeyay ka ridday shaqaaqooyinkii ka dambeeyay doorashada - Sabahionline.com
Maxkamad Kenyan ah oo xabsi daa’inkii ugu horeeyay ka ridday shaqaaqooyinkii ka dambeeyay doorashada
Maxkamad ku taal Kenya ayaa Talaadadii (12-kii June) waxa ay soo saartay xukunkeedii ugu horreeyay ee xabsi daa’inka ahaa ee la xiriiray shaqaaqooyinkii daba socday doorashadii 2007 iyo 2008-dii, sidaana waxa qoray wargayska Daily Nation-ka Kenya.
Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah oo waqti u qabatay xilliga la qaadayo dacwadihii la xiriiray rabshadihii daba-socday doorashooyinkii Kenya
Kenya oo raadinaysa in la joojiyo dacwadda Maxkmadda Dambiyada Caalamiga ah ee Kenyatta iyo Ruto
Paul Kipkemboi Ruto, oo 24 jir ah ayaa waxa lagu helay in uu dilay Kamau Kimani Thiongo’o oo 67-jir ahaa oo ay daris ahaayeen. Shaqaaqooyinkii daba socday doorashada ayaa waxa ku dhintay in ka badan 1,100 qof waxaana ku barakacay dad gaaraya 600,000.
“Waa dambiile sida lagu xukumay sababtoo ah waxa u qayb ka ahaa koox loo dhisay in ay weeraraan dadka kale sababtoo ah farqiga qowmiyeed ee u dhexeeya, halkaas oo ay dhimasho ka dhacday,” ayay tiri Garsoore ka tirsan Maxkamadda Sare ee Nakuru Roselyn Wendoh.
Xukunka lagu riday Ruto ayaa ku soo beegmay hadal uu Talaadadii soo saaray xeer ilaaliyaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada kaasoo uu ku sheegay in labada nin ee laga yaabo in ay galaan tartanka madaxweynanimada Kenya -- ee kala ah Ra’iisul-wasaare ku-xigeenka Kenya Uhuru Kenyatta oo 50 jir ah iyo wasiirkii hore ee beeraha William Ruto oo 45 ah – ay maxkamadeeyntoodu dhacdo isku mar, si looga fogaado in ay soo baxaan kala-jeclaasho, sidaana waxa sheegtay AFP.
“Labada kiis waa in ay is barbar socdaan isku xilli,” sidaana waxa shir jaraa’id oo ka dhacay Heeg ka sheegay xeer-ilaaliye Luis Moreno-Ocamp, halkaas oo qareennada difaacu u yimaadeen fadhi biloow ah oo dhagaysi ahaa.
Kenyatta iyo Ruto waxa ay ka mid yihiin afar qof oo Kenyan ah oo lagu eedeeyay in ay soo abaabuleen shaqaaqooyinkii ka dambeeyay doorashooyinkii dhacay 2007-dii.
Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah ayaa qorsheeynaysa in ay biloowdo dhagaysiga dacwooyinka bisha March ee soo socota, oo ah isla bisha uu dalku qorsheeynayo in uu qabto doorashada madaxweynenimo. Xaakimka guddoonka haya Kuniko Ozaki ayaa sheegay in maxkamaddu ay gooyn doonto taariikh mucayan ka hor inta ayan galin fasaxeeda 14-ka July.